Dlala iRummy ku inthanethi | Dlala amageyimu we-Rummy Mahhala ku inthanethi
Ikhaya / Imihlahlandlela / dlala i-rummy ku inthanethi
Dlala i-Rummy ku inthanethi
Uyemukelwa kumhlahlandlela wethu womdlalo weRummy lapho sizobheka khona imithetho eyisisekelo yomdlalo nokuthi ungaqala kanjani uma ungakaze udlale i-rummy ngaphambili. Kunezinhlobo ezimbalwa ze-rummy, njengoba nje kukhona ukuhlukahluka okuningi kwe-poker. Ukwahluka okuthandwa kakhulu kwe-rummy kufaka: i-Gin Rummy, iRummy yendabuko, iCanasta, iKaluki, i-Oklahoma Gin, nokunye okuningi. Umdlalo uqale e-Old West futhi ubone ukuphindukuzalwa okuningi eminyakeni edlule.
Inhloso enkulu ye-Rummy ukuthi ube ngumdlali wokuqala wekhadi ukuqeda wonke amakhadi asesandleni sakho ngokudlala ama-run namasethi. Yize kulula ukufunda i-rummy, kungenye into ukuyazi kahle, ngaphandle kwezinyanga noma neminyaka yokuqeqesha.
Rummy kuyi geyimu ye khadi edinga isu. Uzophumelela kakhulu uma ungaqagela ukuthi imaphi amakhadi abaphikisi bakho abawalahle ngaphandle bese uzama ukuthola ukuthi imaphi amakhadi abasenawo ezandleni zabo. Kuyasiza njalo uma unenkumbulo enhle ezokuvumela ukuthi ugcine konke emqondweni kuwo wonke amakhadi adlalwayo.
Udlalwa kanjani umdlaloo i-Rummy ku inthanethi
Ake sehlele ezisekelweni. Abadlali ababili kuya kwabayisishiyagalombili babamba iqhaza emdlalweni we-rummy futhi inhloso ukuzama ukuthola amaphuzu amaningi ngesikhathini esithile. Umdlalo udlalwa ngekhadi elijwayelekile lamakhadi angu-52 futhi umdlali ngamunye uthola amakhadi ayishumi ukuqala ngawo.
Umdlali ongakwesokunxele somthengisi uyaqala bese ukudlala kudlulela ohlangothini lwe washi. Abadlali bathola ithuba lokudweba amakhadi, balahle futhi bakhe ama-melds. Abadlali bonke bazama ukulahla wonke amakhadi abo noma bayeke ukudlala (noma bangqongqoze) lapho benamaphuzu amaningi.
Ama-rummy melds aqukethe amaqembu wamakhadi ama-3 + wesudi efanayo noma isikhundla. Lokhu kusho ukuthi kufanele uzame ukuthola izinombolo ezintathu noma ngaphezulu zenombolo eyodwa, okungukuthi ezimbili kumeld eyodwa noma isethi eyodwa yedayimane equkethe ukulandelana okungukuthi eyodwa, ezimbili, ezintathu.